Izabelomali zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu zehla ngo-16% | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ubuntu kumele bubhekane nezinselelo eziningana ezibalulekile ukuze uphumelele. Sonke sizobe sizwe ngabo okungenani kanye: ubuphofu, ukufuduka kwabantu abaningi, ukungabi namanzi noma ukuguquka kwesimo sezulu. Indlela izinto ezisebenza ngayo, ukuze izwe lithuthuke kumele libe nemali; Ngaphandle kwayo, ngeke ukwazi ukuvikela izindawo zakho lapho amazinga olwandle enyuka, noma uthathe izinyathelo ezidingekayo ukuvimbela amazinga okushisa aphezulu nokuntuleka kwezinsizakusebenza ekukulimazeni.
Ubhekene nalesi simo, uhulumeni waseSpain usike isabelomali sokulwa nokuguquka kwesimo sezulu ngo-16%, isuka ezigidini ezingama-62,98 ngo-2016 yaya ezigidini ezingama-52,76 kulo nyaka ka-2017, njengoba kwabikwa nguMnyango Wezolimo kanye Nezokudoba ephephandabeni La Vanguardia.
Umehluko wesigidi esingu-10,22 ungenxa yokuthi ukulinganiselwa kwemali engenayo endalini isukile kuma-euro ayizigidi ezingama-50 ngo-2016 yaya ezigidini ezingama-40 ngenxa yokwehla kwentengo yamalungelo okuphuma emakethe. Ngokusobala, uMnyango usekelwa yingxenye yemali engenayo etholwa yizindali okufanele zikhokhwe yizinkampani ezinkulu ezingaphansi kohlelo lokuhweba lokukhipha umoya. Kufanele bathenge amalungelo kulokhu kukhishwa, okunenani lama-euro ama-5 ngethani le-CO2.
Iyaphi leyo mali? Uhlelo Lokukhuthaza Ezemvelo (PIMA) -Adapta, iNational Parks Agency izothatha ama-euro ayizigidi eziyi-1,5; i-General Directorate of Coasts 2,55 million, kanye ne-General Directorate of Water, esivele inezigidi eziyi-18,9, izothatha ezinye izigidi eziyi-4,9. Ngaphezu kwalokho, izigidi ezingama-34 zizokwabelwa ukuzivumelanisa nezimo zezulu kulo nyaka, uma kuqhathaniswa nezigidi ezingama-32 ngowezi-2016.
Kodwa-ke, kulindeleke ukuthi izwe likwazi ukuzivumelanisa kangcono nokuguquguquka kwesimo sezulu, lisungule amasu amasu okuvikela isimo ukuthi singabi sibi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izabelomali zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu zehle ngo-16%